Miroso Mankany Amin’ny Firesahana Fandriampahalemana i Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 2:53 GMT
Taorian'ny fandresen'ny Revolisiona Aprily, sy ny Fanambaràna goavana iray nataon'ny Parlemanta izay nampihena be tokoa ireo fahefan'ny mpanjaka, sy nanoloana ny anaran'ny tafika avy amin'ny Tafiky ny Mpanjaka Ao Nepal ho Tafik'i Nepal, ary koa ny kabary andiany voalohany niarahana tamin'ireo maoïstes, dia marobe ireo olana no tsy mbola voavahan'ny governemantan'ny fiarahamientan'ireo antoko fito . Tsapa ho mihisatra loatra ny fizotrany.
Manontany ny Demokrasia ho an'i Nepal (DFN) Iza No Hitantanana ireo Fifidianana Solombavambahoaka
Saingy sahala amin'ny tsy hisarahan'ireo Maoïstes amin'ireo miaramilany, tsy hisaraka amin'ny parlemantany ihany koa ireo antoko fito. Ilàna fiarovana avy amin'ny Tranobe ny fiarahan'ireo antoko fito. Midika izay fa ilaina ny fandraisana fepetra fnorenana ny fifampitokiana.
Miresaka mikasika ireo fahasosorana ny United We Blog (UWB): Manampy Fahasosorana eny amin'ny Vahoakan'i Nepal ny Politika Mihisatra
Ny zava-misy hoe nanao famelabelarana momba ireo tafika miaraka miasa amin'ny governemanta ny filohan'ny tafika nepaley, Pyar jung thapa, tamin'ny alalan'ny fanarahana ireo torolalana, dia tena fanebahana goavana an'ireo zavabitan'ny Hetsi-Bahoaka Faharoa manan-tantara, tamin'ny volana lasa. Tokony ho nalàna tamin'ny asany i Thapa tapa-bolana lasa izay….. Nahoana ny Birao misahana ny Hetra no tsy nanao bemidina tao amin'ny Narayanhitti Royal Palace ary nanao nikajy an'ireo vola izay tokony naloan'ny mpanjaka Gyanendra ho an'ity firenena ity? Iza no nanakana ny kabinetra hanafoana ireo didy fampisamborana an'ireo rehetra izay voarohirohy tamin'ny fanafoanana ilay fihetsiketsehana? Miadana tena miadana ny fandehan-javatra ary mampitombo ny hamafin'ny hatezeran'ny vahoaka izany.
Anànan'i Bahas ny ampahanà lahatsoratra iray mikasika ireo adihevitra vao haingana nifanaovana tamin'ireo maoïstes sy ireo teboka 25 fitondrantena nifanarahana tamin'izany. Miresaka an'ireo fahasosorana ihany koa Blodgai, saingy avy aminà zoro iray hafa. Manana lahatsoratra iray ny Nepali Notebook mikasika ny zanakavavy an'ny Praiminisitra Sujata Koirala.
Manana tantara fohy mahaliana i Sarahana Shrestha ao amin'ny Samudaya: Tena araka ny fitsipi-danonana. Mivaky sahala amina tantara sosialy noforonina izy ity.
Rehefa nahatratra ny faha-60 taonany i Pushpa, ary telopolo taona kosa ilay vehivavy sakaizany, nanapaka hevitra ny hanafoana ny fiandrianana ireo olom-pirenena. Narotsaka ho amin'ireo vola natao hampiroboroboana avokoa ny ankamaroan'ireo harena lovany rehetra, ampy tsara mihitsy hitsinjovan-dry zareo ny taranaka any aoriana raha toa ara-toe-karena no nampiasàna izany. Nanandrana nitsapa ny vintana tamin'ny anjarany ny andriana, tamin'ny alalan'ny fandefasana ireo zanany lahy roa tany Londona, ary nampiasaina tamin'ireo tambajotranà hotely ny sisa.
4 andro izayPakistana
3 herinandro izayPakistana